तीन युवाले स्थापना गरे ‘ब्लु ल्याडर’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ माघ ७, बुधबार १७:५५ गते
भरतपुर । भरतपुरका तीन जना युवाहरु मिलेर ब्लु ल्याडर बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि स्थापना गरेका छन् । व्यावसाीिक तथा आवासीय भवन निर्माणसम्बन्धी सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिनेगरी युवाहरुले ‘ब्लु ल्याडर’ स्थापना गरेका हुन् । भरतपुरका इन्जिनियर सुधन पौडेल, प्रकाश देवकोटा र डा. लक्ष्मण पौडेलले दुई करोड पुँजी रहने गरी प्रालि स्थापना गरेका हुन् ।
इन्जिनियर पौडेल र देवकोटामा निर्माणसम्बन्धी अनुभव रहेको छ । ‘नक्सा पासदेखि लिएर भवन निर्माण, वायरिङ सबै काम गर्ने उद्देश्यले ब्लु ल्याडर स्थापना गरेका हौँ’, ब्लु ल्याडरका प्रबन्ध निर्देशक ई. सुधन पौडेलले भने, ‘निर्माण सामग्रीहरुको व्यवस्था पनि हामीले नै गर्छौं । सेवाग्राहीहरु कतै दगुर्नु पर्दैन ।’ भवन निर्माण गर्दा विस्तृत स्टिमेट तयार पारेरमात्रै सेवाग्राहीसँग सम्झौता गरिने उनले बताए ।
चार कोठा भएको साधारण घर बनाउन ३४/३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए । एक तलाको भवन पाँच महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी त्यसको चाबी सेवाग्राहीलाई बुझाउन सकिने उनी बताउँछन् । भवन निर्माणमा प्राविधिक कामदारहरु खटाइने उनको भनाइ छ ।
‘भवन भूकम्प प्रतिरोधी त हुने हुने नै भयो । प्राविधिक कारणले केही समस्या भए एक वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत सम्भारको काम पनि गरिदिन्छौँ’, उनले भने । यसको कार्य क्षेत्र अहिले चितवन मात्रै रहेको छ । आगामी दिनमा चितवन बाहिर पनि सेवालाई विस्तार गरिने उनले बताए ।